Madaxwaynaha Puntland oo beesha caalamka ka codsaday in la yareeyo tirada baarlamanka – SBC
Madaxwaynaha Puntland oo beesha caalamka ka codsaday in la yareeyo tirada baarlamanka
Madaxwaynaha Puntland C/rixmaan Maxamed Faroole oo khudbad ka jeediyay shirka Nairobi ayaa codsaday in la dhimo tirada barlamanka KMG ah ee Soomaaliya si xal loogu helo dhibaatada dalka ka jirta.
“Puntland waxa ay dhaliilaysaa waqti kordhintii ay samaysteen barlamanka Soomaaliya,taasina waa mid kor u sii qaadaysa marxaladda hada dalka uu marayo”ayuu yiri madaxwaynaha oo shirka hadal dheer ka jeediyay.
Madaxwaynaha ayaa sheegay in dhibaatada Soomaalida looga gudbi karo ,iyadoo dib u habayn lagu sameeyo barlamanka ,xilli dowlada ay marayso waqtigii kala guurka.
Khudbadda madaxwaynaha waxaa ku jirtay in dowladda hada jirta aysan wax badan ka qaban dib u heshiisiinta iyo amniga ,isagoo intaa ku daray in aan la fulin heshiiyo labada dhinac ay horay u wada gaareen.
“Waxaa jiray heshiisyo horay loo wada gaaray oo aan la fulin ,sidaa darteed waxaan oran karnaa dowladda kama aysan soo bixin shaqadii loo idmaday “ayaa hadaladiisi kamid ahaa.
C/rixmaan Maxamed Faroole ayaa sheegay in maamulkiisa uu guullo badan ka gaaray hormarinta nabadda iyo dhismaha hay’adaha dowliga ah ,isla markaana ay Soomaali badan gobolka u soo qaxday.
“Puntland waxay taageersantahay in xal loo helo dhibaatooyinka dalka ka jira,mana aqbalayno in la dafiro xuquudii ay lahaayeen dadka reer Puntland”ayuu intaa ku daray madaxwayne Faroole.
Sidoo kale qaar ka mid maamuladii ka soo qayb-galay shirka Nairobi ayaa iyagana soo jeediyay go,aanno lagu taageerayo nabadda dalka Soomaaliya.
Maamulka Puntland ayaa dhaliisha ugu badan ee dhibaatada Soomaaliya u jeediyay DKMG ah ,waxaana arintan ay imaanaysaa ,iyadoo madaxwayne Sheekh Shariif uu shalay ku eedeeyay beesha caalamka dhibaatooyinka wadanka ka jira in ay hormuud ka tahay